I-Geomumadas 3.0: Izigqibo ze-SEO - ii-Geofumadas
NgoJanuwari, 2011 egeomates My
I-2011 ithetha inyathelo elibalulekileyo kwi-Geofumadas, emva kweminyaka eyi-3 yokusebenza njenge-subdomain ye-Cartesians. Sathetha noTomás, endimbulela kuye ngeli thuba kunye nalowo ndiyathemba ukuba naye unxibelelwano olubalulekileyo kule ndawo nakwezinye iimeko esizifumene.
I-Cartesians, naphezu komonakalo ababenayo ngexesha ngenxa ye-spam spam, ibe yimpembelelo ebalulekileyo nguTomás, nangona emva kweminyaka emininzi kuphela i-Txus kunye no-Txus siye safuna indlela yokujikeleza. Kodwa ke yindlela iimeko, emva kokubekelwa phantsi kwemida ye-WordPress MU, engasayikho njengaleyo kodwa njengokongezwa kwe-generic ebizwa ngokuthi iMultisites. Ezinye izilungiso zetemplate zenziwe kwi-fly, kodwa kubandakanya ixesha elingafumanekiyo ngezinye iinkcukacha kwaye ezinye aziyizilungiso ezilula.
Emva kweengcamango zokulungiselela iinjongo zokusesha (SEO) ziphendukile, imiba ibonakala ifanele iqwalaselwe kwaye ibandakanye izigqibo ezinokunciphisa ukukhula. Phakathi kwezi zinto:
Sebenzisa iiplagi ukuze ulungiselelwe. Kuze kube ngoku andizange ndizisebenzise kakubi amathegi kunye nemetatag; yenzayo xa unayo i-900 entries ephosa ngaphandle kokuba usebenzise iiplagi eziququzelela lolu hlobo lweziqhelo. Ininzi yale plugin ayinayo inkxaso yenguqulo yangoku, ukuyijwayeza kuthatha ixesha.
Ulungiso olukhulu Izinto ezibizwa ngokuba yimizila ziguquguqukayo ngexesha, umzekelo i-AutoCAD 2012 ngoku ayiyona nto inomdla, kodwa kwiinyanga ze-3 iya kuba kwaye yenza ubuyekezelo lwolu hlobo kule ilebula ngaphandle kwe-plugin okanye iskripthi kwisiseko sedatha ... usikhusele ungcwele.
Lungisa iirobhothi zokulandelela, eziqhelekileyo kwi-root directory. Akukona kuphela ukucofa, kukho iiplagi ezenzayo kodwa emva kokuvavanya ndiyabona ukuba kukho izinto ezinokuthi iGoogle ne-Yahoo ayiyiqondi.
Ii-urls ezihlobo, apho i-subdomain ihlawulwa yiinjine zokukhangela. Okunye negama elincinci elikhokelela iblogi leyo ngokwayo ayinobungane.
Ukuqinisekiswa kweW3C ngoku kulula, kuba ngokuchofoza lulayo uluhlu lweephutha. Ingxaki kukuba ezinye iiphoso ziyi-style, ngoko kufuneka uthinte i-css ngqo kwaye kwezinye iimeko kwi-template.
Ndiyathanda ukuba utshintsho lwama-template lusekho, luyinkimbinkimbi kakhulu ukubeka iempendulo eziza kususwa emva kweentsuku ezimbalwa ngenxa yokuba zihlawulisa indawo.
I intanethi Andikholelwa kubo bonke, kodwa ubuncinci ndiyazi ukuba ukungabandakanywa kwi-Facebook ngendlela elawulwayo kuya kuphazamisa ku-2012. -kuba ngaba iiMeya zingambethi ngeli xesha.
Ukwakha isiXhosa Omnye umqulu ...
Umbhalo weAnchor. Hamba, zingaphi izinto onokuzifunda.
Ewe, phakathi kwezicwangciso kwiintsuku ezimbalwa ezizayo kuya kuba kukufudukela kwi-domain Geofumadas.com ukuba ixesha elidlulileyo liye lihamba kodwa lingenakulungiswa ukuze i-Google ingaqapheli ukuba iyisimboli quasi-exacta.
Ngaphandle koko, uNancy ugqibezele iminyaka emibili yeetitikiti ngesiNgesi. Kuye kwandibiza ihlabathi ukuba ndiyiqonde i-caliche yam, kwaye okwethutyana sasizoyivakalisa kwinguqulelo chabacano. Leyo iya kuba yinye idilesi, endiyithemba ukuyifumana emakethe eyinkimbinkimbi kwaye andizange ndize ndifikelele ngaphandle kokufumana isixhobo sokucoca ugaxekile kumagqabaza. U-Askismet wenza umsebenzi omningi kuloo nto kodwa ukuba unesiSpanish undibonise ukuba i-Anglo-Saxon spam idinga ukubona nangaphezulu kweso.
Kunzima kangakanani ukuthetha oku ... kodwa yile ndlela. Kwiintsuku ezimbalwa baya kusetshenziselwa ukuhanjiswa nokutsha ulusu, umxholo ondizisele into ezonwabisa kunye nenxalenye yeholide kunye nale mihla kaJanuwari. Into ebalulekileyo, Geofumadas iyaqhubeka, igama elihlawulwa kakhulu kwiCartesians, iCartesia kunye nawo wonke uluntu.
Ewe, izicwangciso ezininzi zalo nyaka.
Blog egeomates My Wordpress
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuthetha / Ukuthatha inxaxheba: IiNkonzo zoomasipala
Post Next Ares, enye i-CAD ye-Linux kunye ne-MacOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 kwi "3.0 Geofumadas: I-SEO Izigqibo"
Ndiyakuvuyela! ngenxa yenguqu, ngaphandle kokungabaza ukusingatha kunye neyakhe idilesi kukunika inzuzo eninzi kwaye ikuvumela ukuba uqhubeke ukhula.
Ndicinga ukuba nguwe kuphela umntu obenalo ithuba lokufunda, ukuphinda afunde, aguqule kwaye angaqondi - nganye iincwadi zam.
Inhlonipho yam, umhlobo wam.
Ukuba uqashwe ngumtoliki onobuchule kwisifundo sobugcisa kwaye utyalwe kwimeko yesiqhelo de uqonde ukuba yintoni imbongi yobuchwephesha eyayizama ukuyithetha ... Ndazise.
Kwaye ukuba uyitsho, sithandwa Don G! Kuba, ukusuka kwento eyenzeka kwinkumbulo zam ngeli xesha, phakathi kwee-topolillos, i-chiripiorca, ukulala kwi-zacatera, i-chirrio, i-chingastoso kunye ne-palo kunye nokuba yimizekelo ebalaseleyo yokutya okuphakathi kwe-Central American ezifana: ii-nacatamales, isuphu yolwandle , i-pupusa, ipita, kunye neziselo ezinxilisayo ezifana ne-pozol, ngokuqinisekileyo inokutsho ukuba:…. kwizinga le-1 ukuya kwi-10 ndiza kuhlala ndikwi-4 ngokwemigaqo yolwazi…. 🙁
Mhlawumbi ngelinye ilanga ubhale ii-avatars zala mava ayingqayizivele kunye nekhethekileyo oku kuthetha ukuguqulela i-Geofumadas!
Kwaye uthini ngokufunda ukwazi ilizwe elitsha elibandakanya ukumamela iDef Leppard kunye nokufumanisa ukuba legend iyintoni kulo mzekelo kaChillica. Ewe, enye into, mhlobo, enye into.